Saturday November 16, 2019 - 18:54:58 in Wararka by Liibaan Jeexoow
mandiqadda saaxilka ee dhacda galbeedka qaaradda afrika waxaa kusii xoogeysanaya jihaadka hubeysan ee lagula jiro Faransiiska iyo ciidamada calooshood ushaqeystayaasha ah ee ka socda dowladaha mandiqadda.
Weerarada Jihaadiyiinta JNIM ay ka fulinayaan sedax wadan oo daris ah ayaa xoogeystay taas oo sababtay in mujaahidiintu ay qabsadaan dhul ballaaran, wararka ka imaanaya galbeedka iyo bartamaha wadanka Maali ayaa sheegaya in ciidamada xukuumadda dabadhilifka ah ay isaga firxadeen deegaanno hor leh.
Kadibna weeraro isdaba joog ah oo dagaalyahanada jamaacada Ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta ay ka fuliyeen saldhigyo kuyaal gudaha wadankaas ayay ugu dambeyn ciidamada cadowga ku qasabanaadeen dib ugurasho.
war rasmi ah oo kasoo baxay taliska melleteriga dowladda dabadhilifka Maali ayaa lagu sheegay in ciidamadu isaga bexeen dhul ballaaran oo dhaca xuduudda Burkina Faso iyo Niger "iyadoo dib loo eegayo xaaladda dagaalka ayay ciidamadu sameeyeen howlgallo melleteri oo dib looga baxayo tuulooyinka iyo dhulka fog ee dhaca xuduudda Burkina Faso iyo Niger ,ciidamada waxaa lageeyay meel ay ku heli karaan dib isku aruursasho awood leh" ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay melleteriga xukuumadda Maali.
Howlgal aad u qorshaysan oo xoogaga Jihaadiga Alqaacidda ee mandiqadda saaxilka ay ka fuliyeen hareeraha magaalada Tambookto ee wadanka Maali ayay ugu suurtagashay in ay kusoo furtaan maxaabiis mujaahidiin ah oo xabsiyada shisheeyaha ku xirnaa.
Bayaan kasoo baxay hoggaanka Jamaacada Ugargaaridda islaamka iyo muslimiinta oo ay faafisay mu'asasada Alzalaaqa ayaa lagu sheegay in tobanaan maxaabiis muslimiin ah lagusoo furtay.
Weerarka oo ahaa mid xoog kugal ah ayaa sababay in oodda laga qaado maxaabiistii wakiillada Faransiiska ugu xirnaa xabsiga, bayaanka kasoo baxay JNIM ayaan uqornaa sidaan.
Umadeenna muslimka ah gaar ahaan walaalaheena mujaahidiinta ah iyo maxaabiista ku jilbaha xiran xabsiyada dawaadiiq waxaan ugu bishaaraynaynaa in lasoo xureeyay oo lasoo furtay walaalihiina maxaabiista ahaa ee ku xirnaa xabsiga deyri ee dhaca koonfurta magaalada Tambookto ee wadanka maali taariikhdu markii ay ku beegneed maalin isniin ah 14 Rabiicul awal 1441 kuna asteysan 11 November 2019.
"allaah Subxanahu watacaa ayaa usuurtageliyay walaalihiina mujaahidiinta maalidad gummeysiga tooska ah ku jirta tan iyo markii ay soo galeen ciidamada farasiiska waqti hadda laga joogo 6 sanadood ka hor,dullaanaas faransiiska waxaa barbar socda dil,barakicin iyo in laqafaasho shacabkaas doonaya in uu ku noolado nolol xuriyad iyo karaama leh. mujaahidiinta waxaa usuutagashay in ay xoog ku galaan xabsiga Arribinda kalkaas oo ay si dulmi iyo gardarra ah ugu xiranyihiin tobanaan maxaabiis muslimiin ah" ayaa lagu yiri bayaanka.
Jamaacadan Jihaadiga ah oo marka magaceeda loosoo gaabiyo loo yaqaan JNIM ayaa ku goodisay in ay sii wadi doonto weerarada ay ku qaadayso saldhigyada ciidamada Faransiiska iyo kuwa Isbahaysiga Q.Midoobay ay ka sameysteen qeybo katirsan wadanka Maali.